Akon’ny fifidianana: niseho ihany ny olana na nilamina aza ny latsa-bato | NewsMada
Akon’ny fifidianana: niseho ihany ny olana na nilamina aza ny latsa-bato
Nisongadina ny olana madinidinika nefa tsy nanakana ny fifidianana izany. Tsy niova firy kosa ny andavanandron’ny olona raha ny teto an-dRenivohitra sy ny manodidina.
Na teo aza ny fifidianana, hita soritra hatrany fa eo am-panomanana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona ny rehetra. Porofon’izany, tsy vitsy ireo niantsena sahady izay ilaina amin’ireo fotoan-dehibe roa ireo, omaly, rehefa avy nifidy. Vokany, nihitsoka ny fifamoivoizan’ny fiara tany amin’ireo tanàna lehibe, manodidina ny Renivohitra, toy ny teny Mahazo sy teny Ivato. Na izany aza, nalalaka sy nigodana ny arabe miakatra aty an-dRenivohitra, rehefa tafavoaka avy ao.
Nisokatra ny ankamaroany
Andro tsy iasana nefa nandraisan-karama ny omaly androm-pifidianana. Nisokatra avokoa anefa ny tapak’andro maraina ny toeram-pivarotana satria betsaka koa ireo nanararaotra niantsena. Tsikaritra koa fa na tsy nisokatra tanteraka toy ny isan’andro aza ny toeram-pivarotana sy fisotroan-toaka, nandray ireo mpanjifa ihany ny mpivarotra.
Matoky ny fahendren’ireo kandidà roa
Tamin’ny 10 ora sy fahefany no tonga nandatsa-bato, tao amin’ny birao 2B ao amin’ny EPP Antsahabe, ny jeneraly Ravelonarivo Jean. Tamin’izany no nanambarany fa matoky tanteraka ny fahendren’ireo kandidà roa ny tenany ka hanaiky izay ho voka-pifidianana eo. Niantso ny miaramila ihany koa ny tenany hankato izay ho vokatra eo. “Manantena aho fa hilamina i Madagasikara, aorian’ny fifidianana”, hoy izy.
EPP Ambaniala Itaosy
Tsy ampy ny biletà tokana
Lany ny biletà tokana, tao amin’ny birao fandatsaham-bato, EPP Ambaniala Itaosy, omaly tokony ho tamin’ny 3 ora hariva. Maro, araka izany, ireo voatery niandry sy tsy afaka nanefa ny adidiny. Raha ny loharanom-baovao voaray, tsy araka ny tokony ho izy ny isan’ny biletà tokana naterina teny an-toerana ka niteraka izao olana izao. Nisy ireo niandry izay vahaolana hatramin’ny ora nikatonan’ny biraom-pifidianana, misy kosa ireo tsy nahandry izany.
Olona roa tratra nanao hosoka
Nahitana tsy fanarahan-dalana ihany koa tany Toliara I. Olona roa no nitondra kara-panondro vaovao be nefa tsy ao anaty lisi-pifidianana ny anarany. Tsy fantany ny mombamomba izany, rehefa natao ny famotorana. Nopetahina lakaoly sy notsindrina fitomboka mena avy aty ivelany ny sary tamin’ireo kara-panondro ireo. Efa nisy fepetra noraisin’ny tomponandraikitra tamin’ity tranga ity.
Nangonon’i Vonjy, Tatiana, Torcelin, Mi.Raz, J.C